Starkvind bụ usoro IKEA iji megharịa ihe nchacha ikuku | Akụkọ Ngwa
Miguel Hernandez | 29/11/2021 13:00 | General, Nyocha
IKEA na-arụsi ọrụ ike iji mejuputa ngwaahịa dị iche iche nke nwere ike ịgụnye "isi ụlọ automation" nke ụlọ ọkọlọtọ. Ihe akaebe nke a bụ mmekorita ya na Sonos na-enweghị atụ nke anyị nweburu ike nyochaa na mbụ, yana ụdị mbụ ha nke nchacha ikuku nwere ike ịnweta nke anyị nwalekwara.
Ugbu a ọ bụ oge iji nụchaa ngwaahịa, na nke ahụ bụ isi echiche na ọhụrụ Starkvind, ihe na-asachapụ ikuku tabletop nwere atụmatụ dabara na ya. Nọnyere anyị wee chọpụta ihe nchacha ikuku a pụrụ iche sitere na IKEA nwere nke na-eme ka ụdị ndị ọzọ maa jijiji n'ahịa a.
1 Akụrụngwa na imewe: Ọ ga-esi ike ịmara na ọ bụ ihe nchacha
2 Mgbakọ na nhazi
3 Ikike nke ịdị ọcha na njirimara teknụzụ
Akụrụngwa na imewe: Ọ ga-esi ike ịmara na ọ bụ ihe nchacha
Na aha na ngalaba nhazi a bụ nchịkọta kachasị mma nke ngwaọrụ ahụ na ihe m chere, site n'echiche dị umeala n'obi m, bụ kpọmkwem ebe kachasị mma. O siri ike ịmata ihe hell bụ ma ọ bụrụ na ha agwaghị gị, nke ahụ dịkwa mma, n'ihi na ọ bụ n'ezie tebụl. Dị ka anyị kwuru, tebụl nke nwere ikike ime ka ikuku dị ọcha na nke nwere usoro IKEA kpochapụrụ nke ị hụrụ n'anya, ma ọ bụ ịkpọasị. Amụtara m ihe mmụta bara uru mgbe m na-edozi ụlọ m, ị ga-azụrịrị IKEA electric screwdriver, ị ga-enweta ahụike na oge.
Agba: Agba aja aja / White Oak
Ntughari: Na integrated table / Na onye mode
Akụkụ: 54 x 55 centimeters
Ma ka anyị ghara iche na-aga n'ihu na-ekwu banyere Starkvind, IKEA purifier na ọ bụ ezie na Ụdị euro 149 ya nwere ike ịbụ okpokoro akụkụ 54 x 55 cm, Anyị nwekwara ike zụta ya na ụdị euro 99 ya, nke na-ejedebe ya ịbụ onye na-asachapụ nke ọma nke nwere ụkwụ dara dara n'ụdị nke gara aga. A na-ejikọta eriri mita mita 1,50 n'ime otu ụkwụ (na-eburu ya n'uche mgbe ị na-etinye ya) ma na-ejikọta ya na gburugburu ebe obibi, Otú ọ dị, njedebe a maka ihe doro anya na ọnọdụ nke tebụl, nke kwesịrị ekwesị ga-etinye ya nso a. mgbidi, ma ọ bụ sofa ka ọ ghara inwe eriri dị ize ndụ kwụgidere gburugburu.
Mgbakọ na nhazi
Na nke a na-arị elu ọ ga-adabere nke ukwuu na onye ọrụ na àgwà ya. O were m obere nkeji iri iji mezue nzọụkwụ iri na atọ ahụ. Tebụlụ ahụ nwere naanị skru asatọ nke etinyere ya na igodo Allen gụnyere yana mkpuchi ụdị pịa, nke ọzọ bụ ọrụ mgbakọ na-eme ka ọ dị ọcha dị ka ntinye nke nzacha na wiring.
Maka nhazi, dị mfe. Achịkọtalarị nzacha nke mbụ mana n'ime akpa, yabụ anyị ga-abanye n'ime ụlọ wee kwụọ ya. Ozugbo anyị mechara nke a, anyị na-etinye nzacha nhicha gas nke abụọ ị nwere ike zụta iche maka € 16 (dị mma maka isi).
Ugbu a bụ oge iji rite uru na njirimara akpaaka ụlọ ya. Starkvind a nwere njikọta na sistemụ IKEA Tradfri, yabụ anyị nwere ike ịrụ ọrụ site na ngwa IKEA Home Smart. Ọ baghị uru ikwu, "akwa" Tradfri ọ dị ezigbo mkpa maka nke a. Anyị na-eso naanị usoro ndị a:
Anyị na-emeghe ngwa ma họrọ ngwaọrụ
Anyị na-pịa bọtịnụ njikọta mgbe achọrọ
Jikọọ na-akpaghị aka
Ugbu a, anyị ga-ejikọta ya na Apple's HomeKit ma ọ bụ Amazon's Alexa wee nwee ọ . Nke a bụ, n'agbanyeghị, ngwaahịa IKEA Tradfri nke mbụ na-eji usoro njikọta akpaka n'ụzọ dị otú a, ọ bụkwa ihe a ga-eji na-ekele ya.
Ikike nke ịdị ọcha na njirimara teknụzụ
Anyị na-amalite site na njirimara teknụzụ ndị bụ isi, ngwaọrụ a nwekwara ọnọdụ «akpaka» nwere ikike akwụkwọ ntuziaka ise nke ga-ebunye ụfọdụ mkpọtụ dabere na ikike ịdị ọcha:
Ọkwa 1: 24 db maka 50 m3
Ọkwa 2: 31 db maka 110 m3
Ọkwa 3: 42 db maka 180 m3
Ọkwa 4: 50 db maka 240 m3
Ọkwa 5: 53 db maka 260 m3
Kedu otu ọ ga - adị ma ọ bụghị, oriri eletrik ọ ga-abawanye nke nta nke nta, n'etiti 3W na opekempe mode na 33W na oke ọnọdụ. N'otu ụzọ ahụ, anyị nwere usoro ihe ndị anyị ga-ejigide.
Ihe nzacha tupu: ihicha izu abụọ ruo anọ
Ihe mmetụta ikuku dị mma: ọnwa isii ọ bụla
Ihe nzacha pụrụ iche: Dochie ọnwa isii ọ bụla
Ihe nzacha gas: Dochie ọnwa isii ọ bụla
Ụdị akpaaka N'aka nke ọzọ, ọ ga-ahọrọ fan ọsọ dị ka àgwà nke ikuku ekele PM 2,5 urughuru mita. Iji dochie nzacha mgbe ịdọ aka ná ntị na-egosi na njikwa njikwa, anyị ga-pịa bọtịnụ «tọgharia» dị n'ime, ma ọ dịkarịa ala sekọnd atọ ruo mgbe ihe ngosi ga-apụ.
Dịka anyị kwurula, a na-eji ihe nzacha ọkọlọtọ na-ewepụ uzuzu, pollen na ihe ndị ọzọ na-ekuku ikuku (PM 2,5). Maka akụkụ nke ya, ihe nzacha gas na-enye anyị ohere ikpochapụ uzuzu, gas na karịsịa isi ísì, ngwa nke a na-ere iche na nke dị n'echiche m dị mkpa, Ọfọn, na-enweghị ya anyị na-napụ otu n'ime àgwà ndị kpọmkwem maka m bụ ihe kasị akpali nke ndị a purifiers, nke ísì. N'oge oyi, ọ na-adọrọ mmasị na-enwe ike "ikuku" ụlọ na-enweghị imeghe windo ọ bụla, ụtụtụ ụtụtụ dị mma na ísì dị ọcha a na-apụghị ịkọwa akọwa.
Dị ka uru, anyị nwere a imewe na naanị IKEA enweela ike ịnye ugbu a na nke ahụ na-ahapụ anyị ka anyị nwee ike ịkwado ntinye nke nchacha, nke ọtụtụ oge bụ ihe kpatara na-eme ka anyị ghara ịla n'ụlọ. Ugbu a, anyị ga-eji Starkvind dochie otu tebụl dị n'akụkụ anyị ma anyị nwere abụọ na otu. Nhazi a na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ndị ahụ ejiri ihe IKEA chọọ mma, mana ha na-anọpụ iche, Ha agaghị emegide n'ọtụtụ ntọala ma mee ka ọ dị mma ọbụna maka ụlọ ọrụ.
N'ihe gbasara afọ ojuju, anyị achọpụtala arụmọrụ dị mma ma n'ihe gbasara ịdị ọcha nke ikuku na mkpochapụ isi, na-esonyere ya na njikọta zuru oke na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ ụlọ na ọbụna IKEA n'onwe ya dị ka. kpuru ìsì a mara mma na anyị anwalela mbụ. N'oge a, Starkvind maka euro 159 yiri ka ọ bụ ihe ọzọ m ga-atụle.
Ihe na: November 29 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: November 27 nke 2021
Mmekọrịta na akpaaka ụlọ
Ikike nke ịdị ọcha na ịdị mfe
Achọrọ akwa mmiri Tradfri
Ụdị na-enweghị tebụl adịghị mma nke ukwuu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Starkvind bụ usoro IKEA maka ịmegharị ikuku dị ọcha [Analysis]